Siyaasiyiintii Ku Howlanaa Xalinta Khilaafkii Xukuumadda Puntland Iyo Ciidanka PSF Oo Is khilaafay – Borama News Network
Siyaasiyiintii Ku Howlanaa Xalinta Khilaafkii Xukuumadda Puntland Iyo Ciidanka PSF Oo Is khilaafay
Siyaasiyiinta Puntland ee ku jirey xal u helista khilaafka hoggaanka PSF ee uu horkacayay Senator Cabdiraxmaan Faroole ayaa ka hadlay go’aankii isimada kasoo baxay ee ku saabsanaa xal u helista arrintaasi, iyaga oo isku khilaafay.
Qoraal kasoo baxay Siyaasiyiinta oo aad u dheeraa ayaa lagu yiri” Annaga oo ah Wafdi ka kooban Gudoomiyaha Golaha Wakillada Puntland Cabdirashid Yuusuf Jibril, Laba Madaxweyne Hore: Senator Cabdiraxman Sheikh Maxamed Maxamuud Faroole, Dr Cabdiweli Maxamed Cali
Gaas, Raysal Wasaare Hore Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke iyo xubno kale oo wafdiga ka mid ahaa, waxaan nabadeyn iyo xasilooni-soo-celin u
nimid Magaalada Boosaaso 29kii December, 2021.
Sidoo kale, waxaan Garoowe kulamo kula soo yeelanay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni, intii u dhaxeysay 25-28 December, 2021. Intii aan joognay magaalada Boosaaso, waxaan kulamo la yeelanay Isimadii
qoraalkii hore soo saaray, Wasirada Puntland, Maamulka Gobolka, Maamulka Degmada, Culimada, Ganacsatada iyo Haweenka. Sidaas oo kale, waxaan la kulanay dhammaan saraakiisha Amniga sida: PSF, PMPF, Daraawiishta, Policeka iyo Nabad-Sugidda ee Boosaaso ku sugan, Wafdigu wuxuu ka qeybgalay kulamo farabadan oo lagu xoojinayo Amniga iyo Xasilloonida Boosaaso. Waxaa magaalada ka muuqata kalsooni-soo-noqosho nabadeed, shacabki qaxay oo soo laabtay, ganacsigii oo dib-u-furmay, Madaarka iyo Dekedda oo si buuxda u shaqeynaya.
Sidoo kale Siyaasiyiinta ayaa sheegay inay caddeyneynaan in qoraalka Isimada 5ta ahi ay soo saareen aanu khusayn ergada, talo aanaan ku lahayn, weliba sidii lagu balanana, aysan la wadaagin, balse ay ku arkeen baraha bulshada.
Sidoo kale, qoraalka soo baxay 11 January. 2022, uusan aheyn mid wax u taraya
Xasiloonida iyo Wadajirka Puntiand.
Ugu dambeynti, waxay ugu baaqeen inta ay khuseyso oo dhan in la ilaalsho, nabadda iyo xasiloonida Boosaaso inta markale la isaga imaanayo iyadoo maanka lagu haynayo in nabadgelyada Boosaaso iyo Puntiand aysan
marna gorgortan gali karin.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in qoraalka ay soo saareen Siyaasiyiinta ayaa sheegay in uusan qeyb ka aheyn oo aan lagala tashan.
” Bayaan loo qaybiyey war baahinta laguna sheegay inuu kasoo baxay wafdi aan ku jiray ayaan wax ka oran. Waxaan cadayn inaan la igalana tashan oo aanan qayb ka ahayn Bayaan kan soo baxay iyo hadalada uu xambaarsana. Bosaso Dhibka soo gaaray xal iyo baaq nabadeed keliyaa dan u ah ayuu yiri” Cumar Cabdirashiid.
Dhawaan ayaa la filayaa in markale Soyaasiyiinta ay sii amba qaadaan dhex-dhexaadinta Xukuumadda Puntland iyo PSF, iyada oo Xukuumadda weli ka hadlin Bayaankii kasoo baxay Isimada Puntland.
Somaliland Oo Ku Dhawaaqday In Deegaanada Somaliland Ka Jirto Abaar Baahsan Baaqna Dirtay
Faysal Cali Waraabe Oo Ka Dhawaajiyay In Dastuurka La Furayo Guurtidana Laga Takhalusi Doono
Raysal Wasaare Rooble Oo Maanta Kulan La Qaatay Safiirka Sacuudiga Iyo Arimaha Ay Ka Wada Hadleen
Bnnstaff Bnnstaff October 23, 2021
Xukuumada Yuhuuuda Oo Hanjabaad Culus U Dirtay Dowlada Iiraan
Bnnstaff Bnnstaff August 4, 2021